अविरल वर्षाका कारण सिद्धबाबामा पहिरो, सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अविरल वर्षाका कारण सिद्धबाबामा पहिरो, सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध
बुटवल । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल नजिकैको सिद्धबाबामा पहिरो गएपछि बिहीबार साँझदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । राजमार्गको माथिल्लो सिद्धबाबा नजिकैको हेडबक्समा माथिबाट पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो ।
सडकमा ठुला ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेको छ । पहिरोले पाल्पाबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुनबाट जोगिएको र अहिले पाल्पा तर्फबाट आएका सवारी साधन दोभानमै र बुटवलबाट गएका सवारी साधन तल्लो सिद्धबाबा नजिकै राखिएको छन् ।
पानी परिरहेकाले पहिरो तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। बुटवल क्षेत्रमा तीन दिनदेखि लगातार पानी परिरहेको छ । पानी पर्न नरोकिएसम्म पहिरो पन्छ्याउन पनि कठिन रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।